Sokajy: Balkon, zaridaina & zavamaniry
Orkide dia zavamaniry malaza be izay hita manerana an'izao tontolo izao. Ny orkide dia vondrona faharoa lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny zavamaniry rakotra rakotra, aorian'ilay tara-masoandro. Izy ireo dia heverina ho tsara tarehy manokana. Noho io antony io, ny orkide dia mpanjakavavin'ny zavamaniry maro ho an'ireo tia voninkazo maro.
Orkide sy lesoka amin'ny fikolokoloana orkide
Ny karazany isan-karazany amin'ny orkide dia goavambe. Misy hatramin'ny 30.000 ny karazana ekena amin'ny ankapobeny.
Ny lesoka mahazatra indrindra amin'ny fikarakarana orkide
Ity lahatsoratra manaraka ity dia milazalaza toro-hevitra sy fika sasantsasany amin'ny fikarakarana sy fikarakarana tsara ny orkide. Ankoatr'izay, ny lesoka izay matetika atao amin'ny fikarakarana orkide dia resahina.
Amin'ny ankapobeny, ny orkide dia zavamaniry mora ampiasaina ary tsy mitaky izany. Na izany aza, misy lesoka vitsivitsy azo atao rehefa mikarakara ireo zavamaniry tsara tarehy sy maro karazana ireo.
Mba tsy hitrangan'izany ary afaka mahazo aina ny orkide, ity lahatsoratra manaraka ity dia manome fampahalalana momba ny fomba hanaovana azy tsara. Satria ny fitomboan'ny orkide dia azo ampiroboroboana amin'ny fomba mety.
Ny lesoka mahazatra indrindra amin'ny fikarakarana orkide - misafidy ny vilany mety
"Fikarakarana orkide | Zavamaniry " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 3. Aogositra 2021 5. September 2021 Sokajy Balkon, zaridaina & zavamaniryKeywords orkide, orkide, Fikarakarana orkide, Fikarakarana orkideLeave a Comment hikarakara orkide | ZAVAMANIRY
Raha maniry zava-maniry salama sy tsara tarehy ianao dia tokony hampahafantatra ny momba azy ireo ary hanangona fahalalana be dia be.
Fikarakarana ireo zavamaniry anaty trano
Toy ny zavamaniry hafa, ny zavamaniry ao an-trano dia mila rano, hazavana, rivotra, otrikaina amin'ny endrika mineraly ary ny mari-pana mety. Ny zavamaniry dia manana ny filàna fototra ihany, fa ny zava-maniry ao anaty kosa mila bebe kokoa.
Miankina amin'ny haben'ny voajanahary niavian'izy ireo, mila hamandoana ambany, antonony na avo izy ireo. Fa mila toerana manaloka koa ianao, hazavana mamirapiratra, tara-masoandro mahery ary rano bebe kokoa na kely kokoa. Ilaina ihany koa ny otrikaina, fanavahana no anaovana otrikaina vitsivitsy na maro, ny mari-pana samihafa sy ny tany misy asidra na alkaly.
Torohevitra fikarakarana zavamaniry trano - © Africa Studio / Adobe Stock
Zavamaniry maro no azo ovainaina, fa ny karazana tia alokaloka kosa dia tsy hiroborobo amin'ny tara-masoandro mivantana. Ny zavamaniry tropikaly dia tsy afaka maniry eo amin'ny toerana mahafinaritra. Ny zavamaniry voninkazo dia maniry toerana mamiratra ary apetraka eo am-baravarankely manatrika atsinanana na andrefana.
Ny ankamaroan'ny zavamaniry dia mahazo aina amin'ny hafanan'ny efitrano. Fa misy ihany koa ny santionany izay tsy tia ny hatsiaka avy any ambany. Amin'ity tranga ity dia tokony apetaho pad styrofoam eo amin'ny varavarankely mangatsiaka. Zavamaniry maro no maniry hamandoana avo. Amin'ny tavoahangy famafazana sy rano madio dia azonao atao ny mamela ny zavamaniry hanao izany.
Ny vovoka amin'ny ravina dia tokony hesorina amin'ny lamba mando, fa azonao atao koa ny mametraka ilay zavamaniry ao anaty fandroana. Miaraka amin'ny faningana vitsivitsy dia tokony hosotroinao ny trano fonenana mba ho somary mando izy, nefa tsy mando. Tsy tokony hameno rano amin'ny mpamboly na saucer ianao, raha tsy izany dia mety ho lo ny faka ary afaka mamorona haingana ireo lalitra kely. "Fikarakaran'ny zavamaniry trano | Trano " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 4. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Balkon, zaridaina & zavamaniryKeywords Fikarakarana ireo zavamaniry anaty trano, voninkazoLeave a Comment hikarakara tokantrano | trano
Na dia tsy misy fanala mahery va aza matetika dia mankasitraka sakafo miparitaka na mihantona ny vorona ao amin'ny zaridaina. Na ny tany mangatsiaka, ny lanezy na ny fotoana tsy misy sakafo voajanahary fotsiny dia faly ireo voro-tanindrazantsika noho ny fanampiantsika.
Eritrereto ny famahanana vorona amin'ny ririnina
Lohahevitra mahafinaritra ny fampahafantarana ny ankizy. Ny famahanana ny vorona dia tsy hoe fampangalana azy ireo ao anaty zaridaina fotsiny mba hahafahana mijery azy ireo.
Ny vorona dia misakafo amin'ny ririnina - © mashiki / Adobe Stock
Amin'izany fomba izany, ny ankizy dia afaka mianatra milalao sakafo ara-dalàna ny biby ary, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny inona. Ny ankamaroan'ny olon-dehibe dia mahafantatra tsara ny dumplings, peratra tit, oatmeal ary voana tanamasoandro ho sakafon'ny vorona.
Ny sakafo mety ho an-dRamatoa Meise sy Andriamatoa Specht
Ny vorona eto an-toerana dia mizara ho mpamatsy malefaka sy mpihinana voa. Izany dia tsy noho ny safidiny ihany, fa koa amin'ny fahaizany. Ny vorona izay mihinana sakafo malefaka dia ho sarotra aminy ny mahita voamadinika mafy. Ny vorona sasany dia lasa omnivores. Ireo no z. B. Titmouse, mpikapa hazo na natch. Ireo dia tsy mihinana ny zava-drehetra amin'ny ankapobeny, fa ny natiora dia mahatonga azy ireo ho mora miova amin'ny safidiny.
Ny mpihinam-bary dia bara, fody, ary vorona hafa izay manana faktiora matanjaka. Amin'izany ianao dia afaka misafidy voa amboletra mora foana ary mamaky mora foana ny voa.
Raha mandinika ireo fepetra voajanahary ireo amin'ny biby ianao ary manaparitaka ny sakafo sahaza ho an'ny olona rehetra ao amin'ny zaridaina, dia hanomana sakafo matsiro ho an'ny vorona zaridaina ianao. Manampy azy ireo hahita sakafo izany, indrindra rehefa mikatona ny rakotra oram-panala, izay ho sarotra be raha tsy omena sakafo.
Tsy ampy ny mamafy ny fambolena amin'ny tanimboly. Na dia afaka mandray eto aza ireo vorona, dia tsy voaro amin'ny biby mpiremby izy ireo. Ity koa dia saka anao na an'ny mpiara-monina aminao. Kely koa anefa izy ireo, satria mahafatifaty toa azy ireo, dia mpiremby! Boaty famahanana izay ahantona amin'ny hazo, anaty kirihitra na an-trano dia manome fiarovana azo antoka ho an'ireo vorona.
Azonao atao ny manangana mpamatsy vorona anao manokana na mividy azy ireo amin'ny fivarotana fitaovana amin'ny vola kely. Na aiza na aiza niaviany, dia tokony hanolotra ny fahafaha-miditra amin'ny sakafo avy any ivelany izy io.
Ny vorona dia tsy tokony ho afaka mamakivaky sy mandoto ao anaty sakafo. Ny tavoahangy soda tsy misy poaka vita amin'ny plastika dia azo totofana eo ambonin'ny tany amin'ny toerana roa mifanohitra. Ny tsorakazo manify dia atosika hamaky ao ary hivoaka kely avy any ivelany. Ireo no "site landing". Misy lavaka manarona no atsofoka eo amboniny, izay matevina tokoa ka azo entina mamaky. Misy lavaka iray koa atsofoka ao anaty satroka visy, misintona ny hook izay manantona azy ary efa vonona ny tavoahangin-tsakafo.
Miaraka amin'ny ankizy, ny toeram-pisakafoanana toy izany dia azonao atao ao anaty fotoana fohy mihitsy. Hanome anao fahafinaretana be dia be izany ary hahatonga ny mijery vorona ao an-jaridaina ho tena mahafinaritra.
Ny baolina tit dia azo ahantona amin'ny toerana rehetra ao amin'ny zaridaina. Ireo tits sy ny vorona hafa dia hahita azy ireo haingana ary nihinana azy ireo tao anatin'ny fotoana fohy. Ny paoma ho an'ny blackbird dia ahantona amin'ny tariby izay voatsatoka. Izy io koa dia mety ho tusidre klik shasch vy, izay avy eo aondrina kely amin'ny farany mba tsy hivoahan'ny paoma.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 13. Oktobra 2020 5. September 2021 Sokajy Balkon, zaridaina & zavamaniry, PetsKeywords Tit dumplings, Fahano vorona, Famahanana vorona, Vorona dia, WinterLeave a Comment mamahana vorona amin'ny ririnina